Waasihuun Takleetiin Featured
Foramii magaalota Oromiyaa kalaqoonni addaa irratti mul’atan
Foramiin magaalota Oromiyaa barana yeroo jalqabaatiif Magaalaa Jimmaatti kabajame miira tokkummaa Oromoo ijaaruurra darbee bu’aaleen kalaqa addaa akka irratti mul'ataniifi miirri waldorgommii akka uumamu kan taasiseedha.
Miirri waldorgommii kun kalaqawwan adda addaafi jijjiirama magaalonni Oromiyaa qabatamaan agarsiisaan akka galteetti walharkaa fudhachuuf bu’uura buuseera jechuun nidandahama.
Foramicharratti magaalonni Oromiyaa 120 kan irratti hirmaatan yoo ta’u, kanneen qalaqaalee garagaraa qabatanii argamaniifi qulqullinni magaalaasaanii koreewwan filatamaniin mirkanaa'e badhaafamanii jiru.
Magaalota muummee kalaqawwan adda addaafi qulqullinaan sadarkeeffaman keessaa Adaamaan ishii tokko yoo taatu, fakkeenyummaa agarsiisteen sadarkaa 1fan badhaasni kabajaa kennameefiira.
Qindeessaan foramii Magaalaa Adaamaa Obbo Kadiir Mohaammad iccitii milkaa'inasaanii wayita ibsan, hawaasa mara karaa qindaa'aa ta’een hirmaachisuun magaalaansaanii badhaafamuu akka dandeesse eeru.
Intarpiraayizoonni Maayikiroofi Xixiqqaa magaalittiitti argaman meeshaalee adda addaa kanneen akka motora jeettiifi firiijii barattootaan hojjetaman fa'iin Adaamaan filatamuushiis ni eeru.
Bu’aan galmaa'ee Adaamaa badhaasise kun ifaajii nama dhuunfaa miti kan jedhan Obbo Kadir, hirmaannaa bilchiinsi magaalattii, kantiibaafi barattootaa bakka guddaa kan qabu ta'uu eeru.
Warri Shaashamannees hojiilee kalaqa addaa kanneen akka motora xiyyaaraa, siidaa Shaashee, siidaa jaarsa biyyaa uffata aadaatiin faayanii haala hawataafi qalbii nama dhormatuun qabatanii dhiyaataniiru.
Uffatawwan aadaa dhiironniifi dubartoonni uffatan bifa ammayyaatiin qopheessanii kan dhiyeessan yoo ta’u, kalaqa kana akkaataa aadaasaa hinfaallessineen dhiyeessuuf yeroof beekumsi aarsaa ta’uu shubbisaafi weellisaan Baandii Shaashee, Dargaggoo Amaan Wayyuu ni dubbata.
Akka Dargaggoo Amaan jedhutti Siidaan socho’aa Shaashee bifa aadaa giddugaleeffatee dhiyaate kun seenaa Shaahseefi moggaasa maqichaa bifa ibsuun bocanii lafa kaa'ameera.
Hawaasni kalaqa kana daaw'atu marti haala ajaaibsiisaan dinqifachaa kan ture yoo ta’u, aadaafi seenaa dheeraa Shaahsmanneen qabdu karaa salphaafi iftoomina qabuun dhiyaachuusaatti gammadeera.
Siida Shaashee sana itti marsee fincaa’aan bishaanii kallattii shaniin kan marse yoo ta’u, seensa shanan Shaashamannee kan ibsuudha. seensawwan shanan Shaashee dargaggoon kun yoo ibsus, karra Aarbaaminci, Karra Hawaasaa, karra Wandoogannat, Karra Baalee Roobee, Karra Finfinnee agarsiisuuf fincaa’aan ujummoo bishaaniin qophaa'een dhiyaateera.
Kalaqni kun wayita ilaalamu ogeessa bilchaataadhaan kan hojjetameefi namoota waa’ee Shaashamannee hinbeekne salphaatti barsiisuuf mala fayyadamame waan ta’eef fakkeenya gaariin irraa baratamu ta’ee argameera jedha.
Magaalaan Shaahsmannee ykn Haruufaa kalaqaalee hawatoofi irraa barataman karaa salphaan qopheessuusheefi qulqullina magaalaashee sirriitti eegsisuu waan dandeesseef 2fa taatee filatamteetti.
Sosochii kalaqa addaa magaalonni muummee Adaamaafi Shaahsmanneen agarsiisan kana waliin dorgomaa taatee sadarkaa 3fa kan baate ammoo Ssabbata yoo taatu, magaalattiin hojiilee kalaqaa kanneen akka motora xiyyaaraafi maashinoota ammayyaa midhaan itti facaafamu qopheessuun fakkeenya taateetti.
Magaalattiin kalaqa addaa kanaan alatti misooma margariisaa qabatamaan mirkaneessuuf hojii walirraa hincinne hojjetteen kan ijjii fi qalbiin namaa irra boqotu taateetti.
Foramii magaalota Oromiyaa yeroo jalqabaatiif geggeeffame kanarratti Oromiyaan Naannoo Ummattoota Kibbaarraa magaalonni sadii hirmaachuun muuxannoo fudhachaafi kennaa waliin kabajaniiru.
Walumaagalatti foramichaan bu’aan kalaqa addaa kan itti calaqqiseefi muuxannoo waliif qooduuf haala mijeessuun alatti tokkummaan Oromootaa akka cimuufi jaalalli naannolee ollaa waliin jiru akka jabaatuuf bu’uura ta’uu waan dandaheef jajjabeeffamuu qaba.
Torban kana/This_Week 4875
Guyyaa mara/All_Days 1642470